श्रीमानहरू सबै विदेशमा, गाउँमा बाझो जमिन खन्दै महिलाहरू | सुदुरपश्चिम खबर
श्रीमानहरू सबै विदेशमा, गाउँमा बाझो जमिन खन्दै महिलाहरू
श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा छन् । कुनै बेला मुरीका मुरी अन्न फल्ने बारी बाँझिएका छन् । अब भने यी बाँझा जमिनमा हरियाली छाउनेछ । अन्न र मसला फल्नेछन् । यही बाँझो जमिनलाई पसिनाले सिँचिइरहेका छन्, छत्रदेव गाउँपालिका(२ काब्रेका महिलाहरु ।
वर्षौंदेखिको बाँझिएको जमिन खन्न एक सातादेखि १८ महिला जुटेका छन् । पाखो जमिन खनेर अन्न र मसला लगाएर आत्मनिर्भर बन्ने उनीहरुको योजना छ । बिहान(बेलुका घरको काम, घाँ’सपात गर्ने र दिनभर गैंती, कोदालो, गल, बेल्चा, फरुवाले खन्ने र सम्याउने गर्छन् ।
गाउँका सबै महिला संगठित भएर काब्रे महिला कृषक समूह गठन गरेका छन् । उनीहरु बाख्रा, कुखुरा बेचेर पैसा जोगाएर मासिक बचत पनि गर्छन् ।‘बाँझिएको बारी र समथर ख¥यान खनेर ७० किलो बेसार लगाइसक्यौं,’ समूहकी पूर्वसचिव सुष्मिता पौडेलले भनिन्, ‘खन्ने क्रम जारी छ ।
एक टुक्रा पनि जमिन बाँझो राख्दैनौं, सबैमा खेती गर्छौं ।’ बाँझिएका बारी स’म्बन्धित व्यक्तिले निःशुल्क रुपमा खेती गर्न समूहलाई दिएका छन् । यहाँ मकै, गहुँ लगायतका अन्नबाली राम्रो उत्पादन हुने गरे पनि बाँदरले क्षति पु¥याउने भएकाले बेसार खेती लगाइने पौ’डेलले बताइन् । ‘जमिनमुनि बाँदरले खोस्रेर खाँदैन,’ उनले भनिन् ।
यहाँ १८ घरको डेढ सय रोपनीभन्दा बढी बारी बाँ झिएका छन् ।को’रोना भा’इरस सं’क्रमण थप फैलिन सक्ने र खाद्य सं कटसमेत निम्तिन सक्ने भएकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्न थालिएको समूहकी अध्यक्ष सीता पौडेलले बताइन् ।
बारी एक्लै खन्न सकिँदो रहेनछ तर एकतामा बल आउँदो रहेछ। उनले भनिन्, आलु, अदुवा, बेसार, हलेदो, पीडालु, सक्खर र खु र्सानी ल गायतका बा ली बाँ दरले खाँ दैन ।
सुरुमा त गैंती र कोदालोले खन्न थकाइ लाग्ने र हा तमा ठेला उठ्ने गरे पनि निरन्तर काम गरेपछि बानी लागेको स मूहकी सचिव कमला पौडेलले बताइन् । महिलाहरु अब चु लोचौ कोमा मात्रै सीमित भएर ब स्दैनौं, उत्पा दनमुखी काम गरेर दे खाउँछौं, उनले भनिन् ।
प्रायः सबै म हिलाका पुरु ष भारत र तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वडाध्यक्ष राजेशकुमार पन्थीले उत्पादित बेसार वडाले खरिद गरिदिने वचन दिएपछि महि लाहरुले धमाधम बारी खन्न थालेका छन् । वडामा एउटा बेसार उद्योग राख्ने र उत्पादित गरेको खरिद गर्ने योजना रहेको पन्थीले बताए ।
महिला हरुलाई उत्पादनमुखी काममा लगाएर स्वरोजगार बनाउन वडाभित्र गठित १५ वटा महिला समूहलाई बेसार खेती उत्पादनमा लगाइएको उनले बताए । ‘बाँझा बारी खन्न प्रोत्साहन गरेका छौं, महिला सक्रिय भएर काम गर्न सुरु गरेका छन्,’ उनले भने । (gnewsnepal.com बाट साभार )
नारी कस्तो हुनुपर्छ ? एक असल नारीमा कस्तो कस्तो गुणहरु हुन्छन् ? पढेर शेयर गराै ।
जन्म दिनको अवसरमा उन्तिस गरिब परिवार लाई गरे राहात वितरण ! सम्मान स्वरूप एक शेयर गराै ।